Ihe ịhụ na Ibiza | Akụkọ Njem
Ibiza bụ agwaetiti nke Islands Balearic na doro anya na ọ bụ otu n'ime ndị kasị ama. Ọ na-apụta maka ịnwe ụsọ mmiri na-adịghị agwụ agwụ na coves na mmiri turquoise, kamakwa maka ntụrụndụ ya a ma ama n'abalị na ehihie. Ọ bụ agwaetiti na n'oge okpomọkụ jupụtara na ndị njem nleta na-achọ ọchị na izu ike n'akụkụ ha. Ma ka anyị lee ihe ọ ga-enye anyị.
Nke a a na-agakarị agwaetiti n'oge okpomọkụ, ebe ọ bụ na ọ dị na nnukwu oge mgbe ọ na-enye anyị oge ezumike ọzọ. Mana ọ bụ ebe kwesịrị ka a na-ahụ n’oge ọbụla n’afọ. Otu agwaetiti mara mma nke nwere ọnụ ọgụgụ na-adọrọ mmasị nke si na ebe dị jụụ gaa n'otu n'ime meccas nke njem na Spain.
1 Dalt Vila center akụkọ ihe mere eme
2 Ihe kacha mma na Ibiza
3 Osimiri Ibiza
4 Na-atụgharị uche n'ọdịda anyanwụ
5 Gaa na ahịa hippie
6 Were njem gaa Formentera
Dalt Vila center akụkọ ihe mere eme
Ibiza abughi nani osimiri na obi uto, dika o nwekwara otutu ihe omuma. Dalt Vila bụ mpaghara akụkọ ihe mere eme kwupụtara na World Heritage Site. Na Dalt Vila, ị ga-eji nwayọ na-aga n'okporo ụzọ ya ndị dị larịị, lee okporo ụzọ ndị dị warara na ụlọ ọcha ma kwụsị na Katidral, na Plaza de la Vila ma ọ bụ n'ọtụtụ ụlọ ahịa ọrụ anyị ga-ahụ. Anyị nwere ike ịrịgo bastions iji nwee echiche kacha mma banyere agwaetiti ahụ ma gaa na Punic necropolis nke Puig des Molins. N’okpuru mgbidi ahụ bụ mpaghara La Marina, nke dị ezigbo mma, yana ebe ntụrụndụ na ụlọ mmanya. Ọ bụ mpaghara ịkụ azụ ochie nke taa na-enye anyị ụlọ ahịa na ọtụtụ ntụrụndụ. Ọ bụ ebe kachasị mma ịchọta ụfọdụ uwe adlib, yana ụdị ejiji Ibizan.
Ihe kacha mma na Ibiza
Anyị enweghị ike ịga Ibiza na-enweghị anụrịrị ihe ndị kachasị mma, ọkachasị ma ọ bụ ọkọchị. Enwere ọtụtụ, mana n'etiti ọtụtụ ama bụ Cala Salada, nwere ájá ọlaedo na mmiri dị ọcha nke Islands Balearic nke nkume na osisi pine gbara gburugburu. Buru n’uche na ọ bụ otu n’ime ndị na-ekwo ekwo n’agwaetiti ahụ, n’ihi ya, ọ ga-esiri anyị ike ịnọ naanị anyị ma ọ bụrụ na ọ bụ oge dị elu. Cala Vadella bụ ihe ọzọ a maara nke ọma, nke mgbidi mgbidi gbara gburugburu na-echebe ya site na ifufe na mmiri turquoise. Sa Caleta, nke dị na ndịda nke agwaetiti ahụ, bụ nke ugwu na-acha uhie uhie guzobere site na ya. Cala Aubarca nwere ezigbo okwute mara mma nke mbuze meworo na Cala Bassa anyi nwere mmiri miri emi maka imi.
Banyere osimiri ya, gosipụtara Playa d'en Bossa, ịbụ otu n'ime ndị kasị ama na agwaetiti. N'ime ya anyị ga-ahụ ụdị ntụrụndụ niile, yana ọrụ yana ụlọ nri. Na mgbakwunye, n'ụsọ osimiri a anyị nwere ebe egwu dị nso dị ka Bora Bora ma ọ bụ Sirocco. N’aka nke ọzọ, anyị nwere Es Cavallet, nke dị na Ses Salines Natural Reserve, ụsọ osimiri na-emepebeghị emepe nke nwere nnukwu mma. Ọ bụ osimiri dị n'okike nke aja aja na-echebe, ọ bụ ezie na ebe ahụ anyị na-ahụkwa ọtụtụ ọrụ nwere ike iwepụ amara ya, yana ebe a na-adọba ụgbọala, Ogwe mmiri na mpaghara dị iche iche.
Na-atụgharị uche n'ọdịda anyanwụ
Agwapụtawo agwaetiti a na-enye ọwụwa anyanwụ mgbe niile a na-atụ anya ya na ọtụtụ narị mmadụ. Enwerela ebe akụkọ ifo n'àgwàetiti ahụ ebe ị nwere ike ịnọdụ ala ma chere ka anyanwụ daa. Na Benirrás ị ga-ahụ otu n'ime ebe ndị kachasị ewu ewu, yana egwu hippie na ndabere. Ọ bụ ebe a ma ama, ya mere n'oge dị elu, ị ga-abịarute n'oge iji zere ịgafe ohere. Anyanwụ ọzọ a ma ama bụ nke Café del Mar n'obodo San Antonio. Ọ bụ ihe ọzọ dị mkpa n'àgwàetiti ahụ ma na-enye anyị egwu dị jụụ nke na-enye ihe niile ihe pụrụ iche.
Gaa na ahịa hippie
Agwaetiti a bụ ebe hippie n'oge afọ isii, tupu ịrị elu nke oge ezumike na njem okomoko nke dị taa. Mana mmetụ ahụ hippie ka na-adịgide n'ọtụtụ ụzọ, dịka na ahịa hippie oyi. Otu n’ime ndị kacha mara amara bụ Las Dalias flea market, nke kasị ochie. Ha na-akwado Hippy Market Punta Arabí, dịka otu n'ime ezigbo agwaetiti dị na Es Canar. N'ezie, ị ga-enyocha oge iji mara oge ụbọchị na ụbọchị ole anyị nwere ike ịchọta ahịa ndị a. Otu na Las Dalias, dịka ọmụmaatụ, na-abụkarị Saturday, ọ bụ ezie na ọ na-agbatịkwu oge ya n'oge oge ọkọchị.
Were njem gaa Formentera
Ihe ọzọ enwere ike ime mgbe anyị bi na Ibiza bụ ịgagharị na Formentera dị nso. Ọ bụ agwaetiti na-enweghị ọdụ ụgbọ elu, ụgbọ mmiri nwere ike iru ya. Formentera na enye anyi otutu onu mmiri na osimiri, dika Ses Illetes, Cala Saona ma ọ bụ Es Pujols Beach. Ebe ọzọ ikwesịrị ịse foto gị bụ na Cap de Barbaria Lighthouse.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Ibiza » Ihe ị ga-ahụ na Ibiza